Physical Exercises – Healthy Life Journal
All posts tagged "Physical Exercises"
လေးပတ်အတွင်း ဗိုက်ချပ်ရပ်စေမည့် ရိုးစင်းသော နည်းလေးသွယ်
၊ လရိပ်မေ ၊ ဝမ်းဗိုက်ချပ်ရပ်အောင် ပြုလုပ်ရတာက သိပ်မခက်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ စားဖို့လိုသလိုအမြဲတမ်း စမတ်ကျကျနေထိုင်တတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း (၁) Plank သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် လက်တံတောင်နဲ့ ခြေချောင်းတွေ...
အသည်းအဆီဖုံး ရောဂါရှိသူတို့အတွက် စားသောက်နေထိုင်နည်း
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာလူမျိုးတွေ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ အဖြစ်များလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးတဲ့သူတွေဟာ သွေးစစ်လိုက်ရင် အများအားဖြင့် မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော(LDL)က များနေတတ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ထရိုင်ဂလစ်ဆရိုက်အဆီ (TG) တွေလည်း တက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းအဆီဖုံးတဲ့ သူတွေက...
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ဆောင်တာကြောင့် ညဘက်မှာ အိပ်ရေးဝ၀ အိပ်မောကျစေပါတယ်။ တစ်နေ့တာမှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသူတွေဟာ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာအဖြစ်နည်းပြီး ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမှာ ပြေးတာ၊ ရေကူးတာ၊ စက်ဘီးစီးတာနဲ့ အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အားကစားတွေပါဝင်ပြီး...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအမှားတွေ ဆင်ခြင်ရမလဲ . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာမှာ လူအများစုပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အလှအပဆိုင်ရာအမှားတွေလုပ်မိရင် ဆံပင်နဲ့အသားအရေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အမှား (၁) လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ မျက်နှာမသစ်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်အတွင်း ချွေးတွေကိုသုတ်တာကြောင့် မိတ်ကပ်၊ အညစ်အကြေး၊ အရေပြားပေါ်က အဆီနဲ့ ချွေးတွေက ချွေးပေါက်ထဲ စိမ့်ဝင်ရောက်ရှိပြီး...
ကခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးစွမ်းပကား ၉ ရပ်
၊ လရိပ်မေ ၊ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာ ကခုန်တာကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပြီး တန်ဂို၊ ဟစ်ဟော့ပ်အက၊ ဗိုက်လှုပ်အက စသဖြင့် ကနည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်။ ကခုန်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ရမ်းလိုက်ရုံနဲ့ပြီးမသွားဘဲ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးအများကြီးကို ရရှိစေပါတယ်။ – စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေခြင်း တေးဂီတသံစဉ်နဲ့အတူ စည်းချက်ညီညီ ကခုန်တာကြောင့်...
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ အနည်းငယ်ပြန်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်မှသာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီပိုတွေ လောင်ကျွမ်းကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ဖို့ အချိန်များများမပေးနိုင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ နေ့စဉ် အချိန် ၁၅ မိနစ်လောက်ပေးရုံနဲ့ အဆီပိုတွေလောင်ကျွမ်းစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေမပြုလုပ်မီ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း ၅...
မေး. ကျွန်မက သမီးလေးကိုခွဲမွေးထားတာ သုံးလရှိပါပြီ။ ဗိုက်ကပူနေလို့ စက်ကလေးနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ချင်လို့ပါ၊ လုပ်လို့ရပြီလား။ ဘာလုပ်ရင် ဗိုက်ချပ်မလဲလို့ အကြံပေးပါဦး။ ချစ်စံအိမ် ချစ်စံအိမ် (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. မီးဖွားပြီးချိန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာမှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာသန်စွမ်းမှု...
နံနက်တိုင်း ပြုလုပ်သင့်သော ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း ၅မျိုး
၊ ကိုထက် ၊ နေခြည်နုနုဖြာကျနေတဲ့ နံနက်ခင်းအချိန်မှာ ဒီယောဂကျင့်စဉ်ငါးရပ်ကို ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တာလုံး စိတ်ခွန်အားပြည့်ဝစေပါတယ်။ (၁) နေရောင်ခြည်ကို နှုတ်ဆက်သည့်ကျင့်စဉ် မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း အပြင်ထွက်လိုက်ပါ။ နံနက်ခင်းနေ ခြည်နုနုအောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကောင်းကင်ကို လက်နှစ်ဖက်ဆန့်တန်းကာ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် တစ်ကိုယ်လုံးကို...
ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်သည့်အခါ သင့်ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းခြောက်သွယ်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) ခြေထောက်နာခြင်း ခြေထောက်ချိတ်ပြီး မထိုင်ပါနဲ့။ ခြေချိတ်ထိုင်တာကြောင့် သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ဆိုးရွားစေပြီး သွေးပြန်ကြောတွေကို ညှစ်ထားသလိုဖြစ်ရာက ထုံကျဉ်တာနဲ့ ခြေထောက်တဆတ်ဆတ်တုန်တာ တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ထိုင်ခုံကိုညှိဖို့ လိုပါတယ်။ ခြေထောက်က ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကျပြီး...
ခြေထောက်သန်မာစေမည့် ကိရိယာလွတ် လေ့ကျင့်ခန်းခုနစ်မျိုး
၊ လရိပ်မေ ၊ ခြေသလုံး၊ ပေါင်နဲ့တင်ပါးဆုံကြွက်သားတွေ သန်မာစေမယ့် ကိရိယာလွတ်အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ခင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း၊ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်း အနည်းငယ်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ – ခြေထောက်ဆန့်ပြီး ခုန်ခြင်း ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကို ဒူးကွေးပြီး ရှေ့သို့ထုတ်ထားပါ။ ညာခြေထောက်ကို နောက်မှာထားပြီး ညာဒူးခေါင်းကို ဘယ်ဒူးခေါင်းထက်နိမ့်အောင် နေရပါမယ်။...